Ubaba ubhoboka ngokujola nomunye wabasolwa ngokubulala indodana yakhe eThekwini | News24
Ubaba ubhoboka ngokujola nomunye wabasolwa ngokubulala indodana yakhe eThekwini
Durban – Ubaba womunye wabafana ababili abaneminyaka engu-10 ubudala okutholakale izidumbu zabo eThekwini usebhobokile ngalolu daba, waveza ukuthi ubethandana nomunye wabasolwa nokubulala lezi zingane.
UThandaza Mankayi utshele iNews24 ukuthi usola ukuthi ingane yakhe ibulawe ngoba wale isithandwa sakhe seminyaka emithathu, u-Amahle Maliwa.
Uthi wanquma ukuba bahlukane ngomhlaka-14 Okthoba. "Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ebengimnakekela yonke le minyaka enze into embi kangaka enganeni yami. Ngabe yiyo indlela abengibonga ngayo le?" ebuza.
La bafana, okunguNjabulo Mankayi nomngani wakhe uLuyanda Msomi, bebenza uGrade 3 eClairwood Boys Primary School.
Bagcina ukubonakala begibela ibhasi belibangise emakhaya ngoLwesibili olwedlule, kepha abazange bafike ekhaya.
Isidumbu sikaNjabulo esase siqala ukonakala satholakala ngoMsombuluko eGrunter Gully Canal, eBayhead, eningizimu yeTheku.
EsikaMsomi satholakala esikhotheni eMontclair, eThekwini, ngoMgqibelo.
OLUNYE UDABA: Lihlehlile elabasolwa ngokubulala abafana abancane eThekwini
Manje uMankayi, oshadelwe, usevule isifuba ngobudlelwano bakhe beminyaka emibili noMaliwa. Uthi wakhetha ukwala uMaliwa ngesikhathi eseqala "ukungawuhloniphi umshado wakhe".
"Sasivumelene ngokuthi angagxambukeli emshadweni wami nokuthi futhi ngeke axhumane nomndeni wami," esho.
Nokho uMankayi uthi uMaliwa akazange awuhloniphe lowo mgomo ngonyaka odlule, waqala wadelela unkosikazi wakhe.
"Ubesenomkhuba wokungifonela ngisekhaya nomndeni wami, nokuyinto esingazange sivumelane ngayo. Wayesenokufonela umkami amtshele ukuthi ufuna ukukhuluma nami. Kwesinye isikhathi wayemthuka," esho.
Lo baba uthi izinto zibe bukhuni kakhulu kulo nyaka wabe esenquma ukuhlukana noMaliwa. "Lo muntu bengimondlela ngisho izingane zakhe, nginqume ukuhlukana naye ngoba esetshengisa ukungawuhloniphi umndeni wami."
UMankayi uthi uzwe kuthiwa uNjabulo noMsomi badliswe ushevu ngaphambi kokunklinywa babulawe.